Ra”iisal wasaaraha Soomaaliya oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra”iisal wasaaraha Soomaaliya oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Xildhibaan Cismaan Cilmi...
Ra”iisal wasaaraha Soomaaliya oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore
Muqdisho (SNTV): Kooxo dhaqar qabayaal ah ayaa goordhow magaalada Muqdisho ku dilay Alle ha naxariistee Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka tirsanaa Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Alle ha u naxariistii Xildhibaan Cismaan Cilmi boqore oo kooxo dhaqar qabayaal ah ay ku dileen Muqdisho.
Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa uga tacsiyadeeyay Qoyskii,Qaraabadii,Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliyeed oo uu ka baxay Xildhibaanka,isagoona Alle uga baryay inuu Janadii fardowso ka waraabiyo marxumka,Qoyskii iyo Qarankii uu ka baxayna samir iyo iimaan Alle ka siiyo.
Previous articleWasaaradda Waxbarashada XFS oo diyaarisay hab casri ah oo imtixaanaadka loo qaado
Next articleMuqdisho(SONNA):- Ku-simaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Alle ha u naxariistee Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo kooxo dhagar qaabayaal ah ku dileen magaalada Muqdisho. Ku simaha Guddoomiyaha Golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa dhammaan Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya,Shacabka Soomaaliyeed,Qoyskii iyo QaraaBadii uu ka baxay uga tacsiyadeeyay geerida marxuumka,wuxuuna Alle uga baryay naxariistii janno. Sidoo kale,Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Marxuum Cismaan Cilmi Boqore,waxayna Alle uga baryeen inuu ka waraabiyo naxariistiisa Janno. Dhan kale, Guddoomiyaha iyo Xildhibaanada Golaha Aqalka sare ayaa Ehlada iyo Golaha shacabka uga tacsiyadeeyay geerida Alle ha u naxariistee Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo Muqdisho lagu dilay